လင်းခေတ် ရဲ့ “မင်းဘယ်ပြေးမလဲ မင်းအောင်လှိုင်”ဆောင်းပါးကို နွေဦးမောင်မောင် ခံစားရ… – PVTV Myanmar
လင်းခေတ် ရဲ့ “မင်းဘယ်ပြေးမလဲ မင်းအောင်လှိုင်”ဆောင်းပါးကို နွေဦးမောင်မောင် ခံစားရ…
လင်းခေတ် ရဲ့ “မင်းဘယ်ပြေးမလဲ မင်းအောင်လှိုင်”ဆောင်းပါးကို နွေဦးမောင်မောင် ခံစားရွတ်ဆိုထားတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 17K Share – 3281
MayThu Aung says:
2021-06-27 at 5:38 PM
တဖက် က စစ်ကောင်စီက အတုယူရမယ့် အရေးကြီးဆုံး အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်
သူတို့ရဲ့ သတငိးက အမြဲ မပေါက်ဘူး လုံခြုံတယ်
သိရင်တောင် သူတို့ လုပိပြီးလောက်မှသိရတာမျိူး
အခုပဲကြည့် အမေစုကို ဘယ်နားထားတယ်တခြား ဖမ်းဆီခံထားရတဲါ အမတ်တွေကို ဘယ်နားထားတယ်ဆ်ုတာ မသိရဘူး
သူတို့ဘက်ကို တခုခု လုပ်မယ်ဆိုရင်
2021-06-27 at 5:43 PM
Wünsche dir bleibt Gesund Daw Aung San Su Kyi 🍀🙏
2021-06-27 at 5:52 PM
2021-06-27 at 5:54 PM
Himmel 🌌 & Boden Daw Aung San Su Kyi & Min Aung Hling ‼️😩
Kyaw Mon says:
2021-06-27 at 6:38 PM
အမေ့ကို လွမ်း လိုက်တာ. နားဆင် ရ လို့ ကျေးဇူးပါ..
2021-06-27 at 7:56 PM
Kowin Khaibawei says:
2021-06-27 at 8:04 PM
ေမတၱာ ထားပံု ျခင္း မတုပါ
အေမ မရွိ တဲ့ အိမ္ ဗရမ္းဗတာ
အေမ အျမန္ျပန္ လာပါ
ကိုယ္ ့အျပစ္ ကိုယ္ ခံရမည္
ပန္း သခင္ လန္းအစဥ္
Phyu Hlaing says:
2021-06-27 at 10:51 PM
Khin Nyo says:
2021-06-27 at 11:26 PM
ကောင်း လိုက် တာ ။ တကယ် ပကတိ အခြေအနေ နဲ့ အမှန် တရား။
2021-06-28 at 11:42 AM
2021-06-28 at 12:43 PM
စာရေးသူဆောင်းပါးရှင်ကို Credit ပေးပါတယ်…
2021-06-29 at 7:57 PM
I pray for her release as soon as possible.
Ko Ko Yin says:
2021-07-04 at 3:25 PM